အိုရာကျုံး! - Lindberg gitarboogie ကစားခဲ့သည်! | Apg29
833 online! | Sidvisningar idag: 199 | Igår: 149 115 |
Lindberg ခဲ့ကြသည် ကစား gitarboogie တစ်လူစည်ကားအတွက်အိတ်ရောနှောဆွဲကစားသမားနှင့်အတူ Halltorp Philadelphia တွင်!
စနေနေ့ညတွင် Lindberg ဆွဲကစားသမားရောထွေးအိတ်နဲ့လူစည်ကား Halltorp Philadelphia တွင်ရှိကြ၏သွားရောက်ခဲ့သည်။
Lindberg ၏ဤအချိန်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည် Håkan Bertilsson , Nenne Lindberg , Ted Sandstedt , မာတင် Lindberg နှင့် Christer Åberg ။
Lindberg သွားရောက်ကြည့်ရှုဆီသို့ရောက် လာ. , အခါ Halltorp Filadelfia စည်ကား
Vecka 04, onsdag 23 januari 2019 kl. 00:01
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 920 640 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 341 kommentarer och 61 360 bönämnen.